फेसबुकमा पर्‍यो लभ,जब भेट्न पुगे युवा युवती,देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल? |
August 30, 2021 adminLeaveaComment on फेसबुकमा पर्‍यो लभ,जब भेट्न पुगे युवा युवती,देख्ने बित्तिकै किन भयो यति ठूलो ववाल?
फेसबुक अहिलेको चल्तीको सामाजिक सञ्जाल हो । यहाँ धेरैको प्रेम हुन्छ भने कतिको फेसबुकबाटै बिछोड पनि भएको पाइन्छ । तर एक यस्तो घटना बाहिर आएको छ । जुन मानिसहरुले थाहा पाएपछि यस्तो पनि हुन्छ र? भन्दै अचम्ममा पर्छन् ।एक जोडी फेसबुकमा कुराकानी गर्दै गर्दा एक अर्काको प्रेममा परे । लगातार कुराकानी भएको थियो । केटा केटी दुबैले सँगै बाँच्ने र म र्ने वाचा गरे । जब ती दुवैले एक अर्कालाई भेट्न बोलाए ।
जब ती दुबै रेस्टुरेन्टमा आमने सामने भए, तिनीहरू पहिले त थररर काँ पे । अनि ब वा ल सुरु भयो । घटना यति बढ्यो कि स्थानीय भद्र भलाद्मी बसेर कुरो मिलाउनु पर्यो ।यो घटना भारतको हो । जानकारीका अनुसार उक्त मामला कानपुर नौगवान सादत क्षेत्रको गाउँको हो । घनौरा रोडमा अवस्थित ती फेसबुके प्रेमी सरकारी विद्यालयमा शिक्षक हुन् ।
दुई वर्ष अघि उनको नजिकैको गाउँको केटीसँग बिहे भयो । ती दुबैको बच्चा छैन । दुबै पतिपत्नी पनि फेसबुक चलाउँछन्, उनीहरूले फेसबुकमा नक्कली नाममा आईडी बनाएका थिए ।यो संयोग थियो कि ती दुबै एक अर्काको साथी पनि भए । आफूलाई अविवाहित घोषणा गर्दै उनीहरुले विवाह गर्न र बाँच्न र सँगै म र्ने वाचा पनि गरे ।
जब प्रेमी बनेका श्रीमानले आफ्नी प्रेमिका अर्थात पत्नीमा भेटौं भन्दै कर गर्न थाले त्यसपछि उनी आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न अमरोहा आइपुगिन् । बिजनौर रोडमा रहेको रेस्टुरेन्टमा यहाँ भेट्ने निर्णय भयो । दिउँसो दुबै आमनेसामने भए पछि, तिनीहरू पहिले त झण्डै बे हो स भए । श्रीमान्‌ले रेष्टुरेन्टमा नै हं गा मा सिर्जना गरे ।यद्यपि त्यसबेला उपस्थित व्यक्तिहरूले उक्त मामला शान्त गरे र पतिलाई घर पठाए र केटीका माइती पक्षका परिवारका सदस्यहरूलाई बोलाए।
पछि गाउँमा पञ्चायतले यसबारे छलफल गर्‍यो ।यो कुरा अघि नबढाउने गरि समाप्त गरिएको छ । अहिले पति पत्नि मिलेरै बसेका छन् । यो विषय क्षेत्रमा छलफलको विषय बनेको छ। प्रतीकात्मक तस्वीर
काठमाडौंबाट घर गईरहेका युवकको पहिरो खस्दा मृत्यु,पछाडी बस्नेको पेट र अनुहारमा चोट